Panasonic 40-inch FHD Android Smart LED TV TH-40GS550S (Silver Stand) ~ ICT.com.mm
HomePanasonic 40-inch FHD Android Smart LED TV TH-40GS550S (Silver Stand)
Panasonic 40-inch FHD Android Smart LED TV TH-40GS550S (Silver Stand)
Panel: LED Screen Resolution: 1920 x 1080 Picture Mode: User/Cinema/Sport/Vivid/Hi-Bright CPU: Quad-Core Speakers: Intergrated Speakers(6Ω) Speaker Output: 16W (8W+8W) Smart TV: Android 9.0 Size: 40 inch နာမည်ကျော် Panasonic အမှတ်တံဆိပ် Full HD Android... [Learn more]
Picture Mode: User/Cinema/Sport/Vivid/Hi-Bright
Speakers: Intergrated Speakers(6Ω)
Speaker Output: 16W (8W+8W)
နာမည်ကျော် Panasonic အမှတ်တံဆိပ် Full HD Android စမတ် LED တီဗွီ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား လက်မ (၄၀) ရှိပြီး Resolution အားဖြင့် Full HD (1920x1080) resolution ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရောင်အသွေးကို ကြည်လင်တောက်ပစွာပြသပေးနိုင်တဲ့ Full HD LED မှန်မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အရောင်အသွေးစိုပြည်မှု၊ အလင်းအမှောင်အနေအထား၊ အသေးစိတ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအနေအထားကို မိမိစိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေပြေ ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ User, Cinema, Sport, Vivid, Hi-Bright စတဲ့ Picture Mode ငါးမျိုးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Android စမတ်တီဗွီ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး OS အဖြစ် Android 9.0 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပါတယ်။ မိမိရဲ့ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ကနေ စမတ်တီဗွီကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်စေမဲ့ Google Chromecast နည်းပညာလည်း Built in ပါဝင်ပါတယ်။ အသံထွက်ကျယ်လောင်ကောင်းမွန်တဲ့ 6Ω စပီကာတွေကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး အသံထွက်အားစုစုပေါင်း 16W အထိရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လှပသပ်ရပ်ပြီး စမတ်ကျတဲ့ ဘောင်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်းသုံးနှစ်အထိ ပေးထားတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချနဲ့ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ စမတ်တီဗွီတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Enter your favorite content on the big screen.Panasonic TVs already come with Chromecast.It lets you watch your favorite content on your smartphone or tablet on the big TV screen. You can also use the TV viaamobile device. Enjoy high-quality images and changing sounds that are not easily available onasmartphone or tablet.
Intuitive Design . The smaller frame not only makes the TV design more beautiful, bit also gives itamore immersive viewing experience.